Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa galmee Himatamtoota Obbo Jawaar Mohammad fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun, beellama itti aanu qabateera. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsManni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa galmee Himatamtoota Obbo Jawaar Mohammad fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun, beellama itti aanu qabateera.
Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa galmee Himatamtoota Obbo Jawaar Mohammad fi namoota isa jalatti himatamanii jiranii ilaaluun, beellama itti aanu qabateera.
Oolmaan dhaddacha guyyaa har’aa irratti, faccisa himatamtootaa dhaga’uuf manni murtii qophee ta’us, sababa hidhamtootni siyaasaa mana hidhaa. Qaallittii guyyoota darbaniif diddaa nyaata lagachuu geggeessaa turaniin, himatamtoonni kun dadhabbii damdamannee himata shiraa nurratti dhihaate ofirraa faccisuu hin dandeenyu jechuun iyyannaa waraqaa galfataniin, Manni murtiichaa, iyyannaa himatamtootaa kanarratti hundaa’uun, beellama haaraa Gurraandhala 22. 2013-tti qabatee jira.
Dhaddachi Guyyaa har’aa hafee beellamni haaraa akka qabamuuf gaafachuu himatamtootaa sababeeffatee, Abbootnii alangaa ‘akka dubbii afaanii haaluutti, nuuf ilaalamee manni murtii murtee haa kennu” jechuun gaafatanii turan.
Haa ta’u malee, manni murtiichaa dubbii bitaafi mirgaa erga dhaggeeffatee booda, “himatamtoonni kan gaafatan jijjiirraa beellamaati malee, sagaleen hin laannu waan hin jenneef, haalli kun dubbii afaanii haaluu jedhamuu hin danda’u” jechuun iyyata abbaa Alangaa kuffiseera.
Bu’uruma kanaan manni murtichaa, murtiilee muraasa adabarseera. Murtiileen darbanis, Beellama itti aanurratti maatiinis ta’e, nami kamuu dhaddacharraa dhorkamuu hin qabu; Himatamtoonni mirga yaala ogeessa dhuunfaa akka argatan; gaazexeessitoonni dhaddacharratti akka fedhaniin hirmaachuu akka qaban jechuun erga murtii laatee booda, beellama itti aanu gaafa Gurraandhala 22.2013tti faccisa himatamtoota kanaa dhaga’uuf beellamee jira.
What was supposed to be a demonstration yesterday in support of Abiy Ahmed turned into Pro Jawar protests and the gathered people were chanting Free Jawhar, we support Jawar and etc.
Despite the fact that Abiy Ahmed tries to eliminate the political foes of his regime he cannot muzzle the voices of millions who support these politicians at a time the government and ideologically aligned parties are preparing for elections.
Dirree Dhawatti barattoonni mana barumsa laga Harree guyyaa har’aa hiriira nagayaa bahuun adeemsa mootummaa abbaa irree Abiyyi balaaleffatanii jiru.
የካቢኔው ምስጢራዊ ውይይት በመቀሌ፣ “ጦሩ 40 በመቶው ትግራይን አልያዘም”፣ ገንዘቡን ህወሓት ዘርፎታል?፣ በእነ ጃዋር ችሎት የተከሰተው